Counter-Strike 1.6 Wikipedia ► Counter Strike 1.6 Download
April 4, 2022	Off	By romas
Counter-Strike 1.6 - Wikipedia
The counter-strike Yakagadzirwa uye yakatanga kuburitswa neValve muna 1999 sechigadziriso kune Half-Hupenyu nhevedzano. Inozivikanwawo se Counter-Strike 1.6 uye Half-Life: Counter Strike munharaunda yevatambi. Ndiwo mutambo wekutanga weCounterstrike series, waivepo kune vashandisi veWindows panosvika gore ra2000. Vagadziri vakaparurawo magadzirirwo akasiyana siyana uye mavhezheni emutambo wekutanga kune mamwe masisitimu anoshanda.
Iyo yekutanga-munhu kupfura kwaunogona kuve nhengo yeboka remagandanga kana gandanga uye wopedzisa chinangwa chako. Avo vanoda kunakirwa Gameplay pasina kutora chikamu mairi anogona zvakare kuona mutambo wevamwe vatambi mune yevaoni modhi.
Kuti vave nechokwadi chekukunda kwavo, zvikwata zviviri izvi zvinofanirwa kupedzisa chinangwa chazvo. Neimwe nzira, vanogona kuuraya nhengo dzechimwe chikwata zvakare. Pakutanga kwedenderedzwa rega rega, zvikwata zvinomera panzvimbo yazvo pamagumo emepu, uye vanofanirwa kurwa nzira yavo vakananga kuchinangwa, icho chiri pakati.
Vachaburitswa mumutambo uripo vachamirira kuti ipere vobudazve muchikamu chinotevera. Kukurudzira kutamba kwakanaka, mutambi wega wega anotanga nebanga nepfuti. Unogona kutenga zvombo zvitsva uye zvirinani nekuita zvirinani uye kuhwina raundi rapfuura. Zvimwe zvezvinonyanya kufarirwa zvinangwa zvemutambo mu Counter Strike 1.6 zvinopihwa pazasi.
Kununura nhapwa: Magandanga atora nhapwa, uye timu yekupikisa-magandanga inofanira kuvanunura panguva yakatarwa; zvikasadaro, gandanga rinokunda
Kupondwa: Nhengo yeboka remagandanga inopihwa chinzvimbo cheVIP, uye vamwe vaanoshanda navo vanofanirwa kuperekedza nhengo yacho kune imwe nzvimbo pamepu, nepo magandanga achifanirwa kuuraya VIP kuti akunde nguva isati yapera.
Kubvisa bhomba: Magandanga anotanga nebhomba ravanofanira kudyara panzvimbo yakatarwa pamepu, ukuwo timu yehugandanga ichifanira kubvisa bhomba kana kuuraya magandanga vasati vadyara bhomba.
Mutambo uyu une mhando ina dzakasiyana dzemagandanga nezvikwata zvekurwisa ugandanga. Unongova nemasekonzi mashoma ekuchinja hunhu hwako mutambo usati watanga, saka ita shuwa yekuchinja hunhu hwako.
Kusvika iye zvino, kune anopfuura 25 zvombo in Counter-Strike yemelee, pistol, SMG, kurova, pfuti, sniper, uye mapoka epfuti dzemuchina. Sniper pfuti ndiyo zvombo zvinodhura zvakanyanya pane rondedzero, nepo pfuti dzichikwanisa kubata zvakanyanya kukuvadza mukusangana kwepedyo. Sniper pfuti ndiyo yekutanga sarudzo yevatambi vepro sezvo vachikwanisa kutora misoro uye kuuraya vavengi nebara rimwe chete.
Kuti ikubatsire kuburitsa hunyanzvi hwako hwehungwaru kusvika pahupamhi hwavo, iwe unopihwawo zvipfumbamwe zvidimbu zvemidziyo inotangira kubva kugirinedhi kusvika kune nhoo uye bhomba defusal kit. Iwe unozokwanisa kuona murima mushure mekutenga magirazi ekuona husiku nemazana gumi nemaviri emadhora. Zvimwe zveizvi zvombo uye zvimedu zvemidziyo zviripo zvechikwata chimwe chete, saka sarudza timu yako nemazvo.
Tagsmutambi counter strike 1.6 counter strike 1.6 download Counter-Strike 1.6 - Wikipedia cs 1.6 download cs 1.6 Wikipedia CS wikipedia download kurodha cs midziyo counter-strike 1.6 midziyo cs Gameplay Gameplay counter-strike 1.6 mutambo cs Half-Life hafu yeupenyu wikipedia vharafu vharafu wikipedia zvombo Wikipedia
Kuchengetedza Counter-Strike 1.6 Non-Steam
Counter-Strike 1.6 Dhaunirodha Non-Steam Version